Fandresen’ny ekipam-pirenena :: Velona indray ny fanantenan’ny mpankafy Barea • AoRaha
Fandresena no nanombohan’ny ekipam-pirenena malagasy amin’ny taranja baolina kitra na ny barea ny dingana fifanintsanana amin’ny fiadiana ny amboaran’I Afrika na ny CAN 2021 nanoloana an’ireo mpanohana azy teny amin’ny kianjaben’I Mahamasina ny sabotsy teo. Namelona indray ny fanantenan’ireo mpanaraka ny baolina kitra malagasy ny zava-bitan’ny Barea. Tratra ny tanjona. Azo ny isa telo voalohany rehefa nandavo an’I Etiopia tamin’ny isa 1 noho 0 ireo mpilalao malagasy. Na izany aza anefa dia tsy tena maharesy lahatra ny fomba filalaon’ireo mpilalao.
Maro ny nanana fanahiana kanefa be mihoatra lavitra noho izany ihany koa ireo nanantena ny fahombiazan’ny
ekipam-pirenena malagasin’ny baolina kitra amin’ny dingana fifanintsanana amin’ny fiadiana ny amboaran’i Afrika na ny CAN 2021. Tsara fanombohana ny Barea nandritra ny lalao voalohany nifandonany tamin’i Etiopia teny amin’ny kianjaben’i Mahamasina, ny sabotsy lasa teo.
Tamin’ny isa 1 noho 0 no nandresen’ny Barean’i Madagasikara ny Antilope Walya avy any Etiopia, tamin’ity lalao ity. Fandresena nahazoana isa telo saingy mbola betsaka ireo lesoka tokony harenina, indrindra amin’ ny fanovana nataon’ny mpanazatra nasionaly Nicolas Dupuis, izay efa nodradradradrainy fony vao nanomboka ny fampivondronana.
Efa namelona indray ny fitiavana baolina kitra sy ny fanantenan’ireo mpankafy ny nampiakatra an’i Madagasikara teo amin’ny dingan’ny famaranan’ny Can 2019 tany Ejypta. Taorian’izay dia iny tamin’ny sabotsy lasa teo iny indray vao nahita azy ireo nilalao sady nivantana ireo mpankafy baolina kitra. Velona indray, noho izany, ny fanantenan’ireto farany hiakaran’ny ekipam-pirenena malagasy ho amin’ny dingan’ny famaranan’ny Can 2021 hotanterahina any Kamerona.
Isa tokana, isa telo
Nionona tamin’ny vokatra kely azony ny Barea nanoloana an’i Etiopia. Baolina tokana nampidirin’i Rayan Raveloson tamin’ny lohany taorian’ny “Corner” nodakan’i Carolus Andriamahitsinoro (18’) no noentin’ny ekipa malagasy nibata ny fanadresena tamin’ny sabotsy lasa teo. Vokatra izay sady tsy nahafa-po ny Barea no tsy nahafa-po an’ireo mpankafy ny taranja ihany koa.
Nilaza anefa Andriatsima Faneva na i Faneva Ima, kapitenin’ny Barea tamin’ ny CAN 2019, sy Abel Anicet, kapitenin’ny Barea amin’izao fotoana izao fa “ny nahazahoana ny isa telo no tena zava-dehibe”.
Niezaka nanafika hatrany ny Barea tamin’ny fiandohan’ny lalao. Izany no nahatonga ny baolina tafiditra. Tsy hita intsony anefa ilay fanafihana matetika nataon’izy ireo tany amin’ny fizaram-potoana faharoa. Nanjakazaka tanteraka ny ekipa nifanandrina
tamin’io fotoana io saingy tsy nahatafiditra baolina mihitsy. “Natoky tena loatra ny ekipako taorian’ny nahatafidirina an’ilay baolina tokana”, araka ny fanazavan’i Nicolas Dupuis izany. Eo ihany koa, hoy izy, ny fifandonana amin’ny talata ho avy izao ka niezaka nandanjalanja an’izany izahay, indrindra tany amin’ny fiarovantena. Ambony tsara ihany koa ny moralin’ ireo mpilalao malagasy hiatrika ny lalao manaraka amin’i Nizera noho iny fandresena voalohany azo iny.
Mbola tsy ampy handehanana any amin’ny CAN 2021 iny fandresena tokana iny. Nilaza ity teknisianina frantsay ity fa “mila mandresy an’i Nizera isika mba handrosoana hatrany amin’ny lalana mankany amin’ny CAN”. Hisy ny fanamboarana hatao, hoy hatrany izy, mba hahazoana vokatra tsara kokoa amin’i Nizera na dia eo aza ny lalana lavitra haleha.
Eo ihany koa ny ratra nahazo an’i Rayan izay tsy maintsy hampisy fanovana amin’ireo mpilalao iraika ambin’ny folo hiakatra kianja
voalohany any Nizera. Tsy hisy intsony noho ny hateren’ny fotoana ny fanazarantena mialoha io lalao faharoan’ny Barea io.
Nizara roa ny ekipa malagasy ka nanainga omaly maraina sy ny tolakandro izy ireo hiatrika an’izany fifandonana manaraka izany. “Amin’ny alatsinainy (ndlr: anio) tolakandro izahay vao ho tonga any Nizera. Ho henjana ny dia ary ho reraka izahay kanefa ambony ny toe-tsain’ny ekipako hiatrika ny lalao”, araka ny fanazavan’i Nicoals Dupuis.
Kianja efa antitra
Maro ireo lesoka hita tamin’iny fihaonana tamin’i Etiopia iny. Voalohany amin’izany ny tsy fahampian’ny lalao ara-pirahalahiana noentina nampivondrona matetika an’ireo mpilalao mpila ravinahitra. “Ny tsy fahampian’ireo mpilalao mpila ravinahitra no antony nanafoanana an’iny lalao ara-pirahalahiana tamin’i Maorisy iny”, hoy i Nicolas Dupuis. Nanjary tsy ampy ny fahaiza-miaraka, toy ny tany Ejypta, teo amin’ireo mpilalao teny Mahamasina. “Tsara aloha fa tratra ny tanjona dia ny nahazoantsika ny isa telo”, hoy indray izy.
Lesoka faharoa kosa ho an’ireto mpilalao ireto ihany koa ny haratsian’ny kianja. “Ekeko fa nisy ny fanamboarana efa natao handraisana an’io lalao tamin’ ny sabotsy io saingy mila kianja vaovao mihitsy i Madagasikara. Efa tsy azo hilalaovana intsony io kianjaben’i Mahamasina io”, hoy i Nicolas Dupuis, nanakiana ny kianja.
Mpilalao tsy tafiditra
Maro tamin’ireo mpilalao iraika ambin’ny folo niakatra kianja voalohany no tsy tafiditra mihitsy tamin’ny lalao. Isan’ireny ireo irakiraka mpiaro roalahy (Ibrahim Amada sy Abel Anicet Andrianantenaina). Niezaka ny nanao izay tratrany kosa i Rayan Raveloson saingy voatery navoaka izy noho ny dona nahazo azy ka niteraka faharatrana. Nosoloina an’i Arohasina Andriamirado na i Dax izy teo amin’ny fisasahan’ny fe-potoana nilalaovana. Tsy nety nisongadina toy ny filalaony hatramin’izay ihany koa ity mpila ravinahitra any Afrika Atsimo ity.
Mendrika kosa ny lalao nasehon’i Romain Métanire sy Jerôme Mombris ary Jeremy Morel. Hany nampisalasala ny rehetra sy nampitaintaina i Thomas Fontaine, izay isaky ny mahazo baolina dia saika very hatrany izany na azon’ny mpifanandrina. Na izany aza anefa dia voasaron’i Morel tamin’ny traikefa nananany izany. Teo ihany koa ireo fanavotana nataon’i Adrien Melvin, mpiandry tsato-kazo, tsy nahazoan’i Etiopiana isa.
Isan’ireo tsy nety tafiditra tao anatin’ny lalao ihany koa i Njiva Rakotoharimalala sy Carolus Andriamahitsinoro. Saika votsotra avokoa ireo baolina teny an-tongotr’izy ireo ka miteraka tsindry any amin’ireo vodilaharantsika. Niezaka ny nampiseho fara-fahaizany kosa i Faneva Ima Andriantsima, izay sady nanafika no niaro.
Afa-po tamin’ny vitany ho an’ny ekipam-pirenena malagasy i Faneva Ima Andriatsima, lohalaharan’ny Barea mitondra ny laharana fahasivy teny ambony kianja. Nofaranany tamin’ny sabotsy teo ny fiarovany ny voninahi-pirenena amin’ny maha mpilalao baolina kitra azy. Nisalorany ny sainam-pirenena malagasy noentiny nanodidina ny kianja niaraka tamin’ireo vady aman-janany. Nandritra ny efatra ambin’ny folo taona no niakanjo ny fanamian’ny Barean’i Madagasikara ity mpila ravinahitra any Arabia Saodita ity.
Tsy nataon’ny fitondram-panjakana nandalo fotsiny anefa izany. Notoloran’ny Filoham-pirenena amboara izy tamin’ny nahavitany be ny asa ho an’ny firenena. Nanome tabilao ihany koa izy ho fanampin’ izany.
Fehezam-boninkazo kosa no nomen’ny vady aman-janany an’i Faneva Ima teo anatrehan’ny fihobiana nataon’ireo mpankafy nankasitraka azy. “Faly aho mizara ny hafaliako aminareo tazony hatrany ny firaisankina ry Malagasy. Tsy amin’ny baolina kitra fotsiny ihany fa amin’izay rehetra hatao. Mitso-drano ny Barea ihany koa aho mba ho lasa lavitra hatrany”, hoy ity kapitenin’ny Barea teo aloha ity namarana ny tantarany tamin’ny ekipam-pirenena malagasy.
Isan’ireo nisongadina tamin’iny lalao notanterahina ny sabotsy lasa teo iny ny fisian’ny filaminana tanteraka. “Mendrika ny asan’ny mpitandro ny filaminana”, hoy ireo mpijery niditra sy nivoaka ny kianjaben’i Mahamasina. Foana teo ny fifanosehana noho ny
fandaminana mialoha nataon’ny federasiona malagasin’ny baolina kitra niaraka tamin’ireo mpitandro ny filaminana. Namidy aloha avokoa ireo tapakila ho an’ity lalao ity ka niditra fotsiny sisa no nataon’ireo nanana izany. Na izany aza anefa dia nisy ireo mpijery efa tonga teny Mahamasina nilahatra tamin’ny efatra ora maraina.
Fandresena tamin’ny alalan’ny “penalty” teo amin’ny minitra faha-69 no nivoahan’i Côte d’Ivoire nampiantrano an’i Nizera, ny sabotsy alina teo. Mitovy isa, vokatr’izany, ny Elefanta Ivoariana sy ny Barean’i Madagasikara eo amin’ny vondrona K Misy antsika. Hifamadika mpifanandrina izy ireo rahampitso ka samy hanafika any an-tanin’olona. Miankina amin’ny vokatr’ireo lalao ireo no
hahitana soritra sahady ny mety ho solontenan’ny vondrona K amin’ny dingan’ny famaranana.
Baolina kitra – UFFOI U15 :: Tafita amin’ny manasa-dalana i Madagasikara